Xellence na X naKygo, iine ANC uye izwi rinoshamisa | Gadget nhau
Xellence naX naKygo, iine ANC uye inonakidza kurira
X naKygo inoramba ichikura maererano neyakagadzirwa chigadzirwa, pano kuActualidad Gadget isu takaongorora mamwe mahedhifoni, akati wandei nekumisikidza ruzha kukanzurwa, iwo anodikanwa mashandiro ayo ari kuve anozivikanwa munguva pfupi yapfuura. Pane ino nguva, X naKygo aida kuenda nhanho kumberi.
Xellence ndiyo itsva inogadziriswa Active Noise Kanzura (ANC) TWS mahedhifoni akatangwa naX naKygo. Tsvaga nesu mahedhifoni aya ane zvakawanda zvakasarudzika, kuti uone kana X naKygo achiramba achibheja pahunhu uye odhiyo odhiyo kuti agutse vatengi vanonyanya kuda.
Sedzimwe nguva, tinokurudzira kuti utarise vhidhiyo iyo inoshongedza ichi chinyorwa, nenzira iyo iwe uchave unokwanisa kuona iyo isingabhokisi zadza mahedhifoni uye dzidza zvakawanda nezve zvirimo mubhokisi. Mune izvi isu tinokusiirawo yako diki yekumisikidza bhuku kuburikidza nekushandisa.
Kana iwe ukatora mukana ku Nyorera uye tisiye isu like iwe unobatsira iyo Actualidad Gadget nharaunda kuramba ichikura uye nekudaro isu tinokuunzira iwe yakanakisa ongororo, senguva dzose.
1 Dhizaini: Iko X naKygo inoda kuisa njodzi
2 Unyanzvi hunhu uye kuzvitonga
3 Yako yega app uye ruzha kukanzurwa
4 Unhu hweodhiyo uye mupepeti ruzivo
Dhizaini: Iko X naKygo inoda kuisa njodzi
X neKygo zvigadzirwa zvinowanzo famba kubva pagungano, uye mune ino Yechokwadi Wireless (TWS) mahedhifoni zvaisazove zvishoma. Kunyangwe ivo vachigona kutiyeuchidza zviri nyore nezveSurface Buds yeMicrosoft, chokwadi ndechekuti vane zano rakapesana zvachose kune avo vambotaurwa. Isu tinowana yakakurumbira uye yakatenderera mahedhifoni kunze.
Zvisinei, zvindori zvenzeve, yeavo vanounzwa munzeve. Kunzwa kwekutanga kushamisa, iwe uchawana zvakaoma kutenda kuti havawire nyore. Nekudaro, ivo vaenda kune inoenderana uremu mutsara uye yakanaka mapedhi.
Kurema kwefoni: 63 gramu
Colors: Dema uye chena
Aya mapadhi, akati siyanei neaya atinowanzoona, anovabatsira kuti vasafambe kunyangwe chidiki mune chero mamiriro ezvinhu. Kune rimwe divi, kuVanotakura musanganiswa wekudzivirira mazwi usingatombokuvadza tichifunga kuti iwo mahedhifoni ane ANC (inoshanda kurira kudzima).
Mune ino furemu yemashoko tinowana trunk-dhizaini bhokisi, ine yepamusoro kuvhura asi zvinoshamisa diki. Yakawedzera compact kupfuura iyo Huawei FreeBuds 3 kesi uye inongova yakati kurei kupfuura Apple's AirPods V2. Inofanira kutaurwa kuti inobhadharisa kuburikidza ne USB-C uye kuti cTine anosvika gumi seti yemapads ekugadzirisa chigadzirwa kune zvatinoda.
Unyanzvi hunhu uye kuzvitonga
Isu tinotanga nejambwa, chimwe chinhu icho X naKygo chisingawanzo skimp nezvayo zvigadzirwa. Tine vaviri gumi mm madhiraivha ane 10 Ohm impudence uye yekupindura frequency pakati pe20Hz ne20 KHz nekunzwa kwe97 db.
Tine MAKARALI USB 5.0 yekubatana nekuenderana neanonyanya kudikanwa ma profiles A2DP, AVRCP, HSP, HPF uye zvechokwadi kuenderana nezwi re Apple (AAC) Uye ruzha Qualcomm Hi-Fi, aptX. Ivo havana kuda kuita chero chinhu chinoshaikwa.
Kana iri bhokisi isu tine 750 mAh bhatiri, 85 mAh kune yega nzeve iwe. Izvo zvinotipa anosvika makumi matatu emaawa ekuzvimiririra ayo akanyatso kuderedzwa kana isu tikamisikidza iyo ANC (inosvika angangoita maawa makumi maviri mumiyedzo yedu). Kubhadharisa kuzere kwatitorera anenge maawa maviri.
Nekudaro, ine chimbi yekukurumidza yemaminetsi gumi nemashanu iyo inotipa isu kusvika kumamwe maawa maviri ekutamba. Hatifanire kukanganwa kuti tine IPX 5 kuramba mvura uye ziya, saka hatizove nechero dambudziko kana tichida kuishandisa tichirovedza muviri, mumiyedzo yedu vakave vakasununguka uye kunyanya vachidzivirira.
Yako yega app uye ruzha kukanzurwa
Isu tinotanga nekumisikidza ruzha kukanzura, izvi zvinezvazviri mashandiro mumahedhifoni izvo zvinotibvumidza kukanzura ruzha rwese rwekunze kana kumisikidza iyo «Ambient Mode», izvo zvinongotiparadzanisa kubva kunhaurirano dzinodzokororwa kana manzwi, zvakanaka kana tiri kufamba mumugwagwa kuti utipe imwe chengetedzo.
Mune bvunzo dzangu ndakasangana saizvozvo imwe yeanonyatso shanda munzeve maTWS ane ANC yandakamboedza, kuve ruzha kukanzurwa chaiko, kunoshanda uye kwemhando.
Tine Mimi inonzwika kurira kubva kuX naKygo, Kutitungamira kuburikidza nechikumbiro kunotibvumidza kupindura yakateerana mibvunzo uye odhiyo bvunzo kuti mahedhifoni aponese odhiyo profil iyo inogutsa zvatinoda mumhanzi Izvo zvinoonekwa zvishoma, sekumisikidzwa kweiyo bass kuwedzera.
Kune chikamu chayo isu tinacho maikorofoni akavakirwa-mukati ayo mukuyedza vakapindura zvakanaka kwazvo kukurukurirano dzefoni, pamwe nekupemha Siri kuburikidza neyekushandisa chiratidzo chekubata. Isu zvakare tine proximity sensors kuona kana isu tavabvisa uye kumisa mimhanzi (kana kuidzosera).
Unhu hweodhiyo uye mupepeti ruzivo
Panyaya yeodhiyo mhando, sezvakamboitika neyekare X nezvigadzirwa zveKygo, tinozviwana tiine chigadzirwa chakanyatsogadziriswa. Kuteerera kumapoka anotsvaga nerudzi urwu rwemahedhifoni senge Artic Monkeys kana Mambokadzi, yakatitendera kuti tinakidzwe nematanho ese uye zviridzwa.
Imwezve nguva X naKygo inotibvumidza kunakidzwa nemhando dzese dzemimhanzi nekuda kwekugona kugona uye inotangisa chigadzirwa chemhando yepamusoro.
Kune rumwe rutivi, iko kunyorera kuri kwekubata kumeso, ichitibvumira kuti tinzwe kuti isu tine chigadzirwa chinoenderana nemutengo wacho uye kuti tinokwanisa kugadzirisa zvatinoda. Kushanda ruzha kukanzura kunonunura chaizvo izvo zvinovimbisa uye yedu bvunzo mhedzisiro yanga ichinyanya kufarira. padanho rakaenzana nemahedhifoni senge AirPods Pro.
Iyo nguva yemutengo inosvika, 199 euros kune aya mahedhifoni ari pachena kuti anodhura, asi akagadzirirwa mushandisi pamwe zvinonyanya kudhira pane kunyanyisa kutengeserana. Unogona kuzvitenga izvo zvenguva chete pawebhusaiti yepamutemo (link) chena kana nhema.
Yakakwira-mhando zvigadzirwa uye yakashinga dhizaini
Chikumbiro chakanaka chekugadzirisa uye kuzvimiririra kukuru
Chaizvoizvo inoshanda ruzha kudzima dzimwe nzira
Izwi iri remhando yepamusoro
Imwezve poindi yehuwandu haipo
Kuzvimiririra kunotambura zvakanyanya neiyo inoshanda ANC
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Xellence naX naKygo, iine ANC uye inonakidza kurira
Dhawunirodha magazini emahara: iwo matatu akanakisa mawebhusaiti muSpanish
Maitiro ekurodha mhando yemhando yepamusoro yeFLAC yemahara